राष्ट्रिय सभाबाट को निश्किए को –को प्रवेश गर्दैछन् ? सपथ आजै | Pennepal
Home हेडर राष्ट्रिय सभाबाट को निश्किए को –को प्रवेश गर्दैछन् ? सपथ आजै
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा नवनियुक्त १८ सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ आज हुँदैछ । सङ्घीय संसद् भवनको ल्होत्से हलमा बिहान ११ बजे सदस्यहरूको शपथ हुनेछ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नवनियुक्त सदस्यहरूको शपथ गराउनेछन् ।
यी देशका लागि अनअराइभल भिषा बन्द, श्रम स्वीकृति पनि नदिने